Taariikhda – Page 2
VOA-Taariikhda Saxaafadda Boobe Yuusuf Ducaale
70-Guurada Saxaafadda & Maxamuud Jaamac Uur-doox
“Al-liwaa Qarni iyo Akhbaar sida, Waxaan ahay tii afreynaysoo, Aroor walba tayda waa la arkaa, Adduun la baxshiyo ishtiraag ma lahoo, Afkeedana way ku hadashaa”, Maxamed Ismaacii Baa-sarce, Barkhad-cas, Hargeysa Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale, cankaabo@hotmail.com, cankaabo@gmail.com, www.dharaaro.net …
Sawir & Sifayntii: 7aad
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale, cankaabo@hotmail.com, cankaabo@gmail.com, www.dharaaro.net Hargeysa, 8/10/2018ka, “Waa Dharaaro yabloon, Ka dhammaan agtaydiyo, Dhacdo waayaheedaba, Nin kastoo xusuustaa Dhabannada la haystee, Dharaaraa na soo maray,” Maansada Dhayalsi, Axmed-genius, Jigjiga, 6/8/1984kii, Muddaakarooyinkii iyo “tashadduxii jabhadeed aan ku…
Sawir & Sifayntii: 6aad
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale: Hargeysa, /9/2018ka cankaabo@hotmail.com, cankaabo@gmail.com, www.dharaaro.net Waa waayo xusuustood. Sannadku wuxu ahaa 1968kii. Bishu waxay ahayd Ogos, tirsigeeduna 13kii. Maalintu waxay ahayd mid maalmaha ka tilmaaman. Salaasa ayay ahayd. Gelinka ma sugi karo waxaan se aamminsanahay in…
Dugsigii Sare ee Benaadir ee Muqdisho: 1964kii – 1968kii
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale: Hargeysa, 24/9/2018, cankaabo@hotmail.com,cankaabo@gmail.com, www.dharaaro.net, (Waa garooc aad u kooban oo aan idiin ka soo raray Bogga 70aad ee Qabyada Buug aan ka diyaarinayay noloshayda. Waxaan Qormadan sida aadka ah u kooban marriin uga dhigayaa Sawirkan…